Natolotra ho an'ny Lynnhaven Inlet Navigation Channel
Lynnhaven Inlet Dredging Contract natolotra; Nodinihina ny fitaovana mba hampiasaina amin'ny fomba mahasoa
Ny Distrikan'i Norfolk, Corps of Engineers an'ny tafika amerikana, dia nanome fifanarahana 2 tapitrisa dolara amerikana momba ny asa fitrandrahana fitrandrahana ao amin'ny Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel any Virginia Beach, Va.
Lynnhaven Inlet isan-taona dia miaina fanerena fikojakojana ny fiadiana amin'ny fikorontanana mitsikera; na izany aza, noho ny fiantraikan'ny Hurricane Sandy tamin'ny morontsiraka amoron-dranomasina any Virginia Beach tamin'ny taon-dasa, nihabe ny fahazoana nitoto ary nilaina ny fanodinana haingana, hoy i Kristin Mazur, mpitantana ny tetikasa Distrika Norfolk.
"Ny fanadihadiana natao vao haingana dia nahitana fisolokiana tsikombakomba amin'ny fantsona fidirana, fanodinana ny fantsom-pifamoivoizana sy sisin'ny tetikasa," hoy i Mazur. "Ity jono ity, raha avela irery dia mety hisy fiantraikany amin'ny indostrian'ny maritimaly marobe ary manohintohina ny fidinana azo antoka sy mahomby."
Matetika ny tetik'asa fanamboarana feno fikojakojana tanteraka isaky ny telo taona.
Southwind Construction Corporation, orinasa kely miorina ao Evansville, Ind, dia hanafaka ny fantsona mankany amin'ny halalin'ny rano mankany amin'ny 10ft "midika hoe rano ambany kokoa." Ny fifanarahana amin'ny dredging koa dia ahitana tongotra roa ambanin'ny alàlan'ny fanondrahana lalina.
Mampiasa fantsona fantsona fitaterana entana ny mpitatitra entana amin'ny fampandehanana ny làlan-drongony ho fampiasa mahasoa any amin'ireo faritra nametrahana azy amina faritr'i Ocean Park Beach sy ny Maple Street Upland Placement Site any Virginia Beach. Ao anatin'izany rehetra izany, ny kontraktor dia hanjavona amina fitaovana cubic 134,350.
Satria nisy fiantraikany tamin'ny Hurricane Sandy, ny alàlan'ny famatsiam-bola, amin'ny alàlan'ny fampielezana aorian'ny Post-Sandy Disaster Relief Appropriations, Corps ary ny fikojakojana ny fikojakojana ary ny vola mpamatsy vola any an-toerana.
Ilay tetikasa dia ho vita amin'ny Janoary 2014.
Lynnhaven Inlet Federal Navigation Channel, nahazo alalana tamin'ny Ony sy ny lalànan'ny Harbour tamin'ny Oktobra. 23, 1962, dia hita ao amin'ny Chesapeake Bay, ao anatin'ny tanànan'i Virginia Beach. Ny tetik'asa fanaratoana dia manome fidirana any Chesapeake Bay sy Atlantika Atlantika ho an'ny sambo fanjonoana ara-barotra, sambo fanjonoana, lakana sambo ary sambo fanaovana fialam-boly manokana.
Ampiasain'ny sambo mpanamory fiaramanidina ho an'ny seranam-piaramanidina any Virginia sy Maryland izay miorina ao anaty anaty sambo ny fantsona hitaterana ny mpanamory fiaramanidina avy any amin'ny lalàn'izy ireo mankany amin'ny sambo midira mankany amin'ny Bay Chesapeake.